Home » Lahatsoratra farany farany » Zon'olombelona » Nihena tanteraka ny fahalalahana an-tserasera nandritra ny 11 taona nisesy
Vaovao Mafana Belarus • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana China • Crime • Kolontsaina • fanabeazana • Vaovao Mafana Egypt • Entertainment • Films • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Zon'olombelona • Vaovao Momba ny Islandy • LGBTQ • Music • Vaovao Mafana Myanmar • Vaovao • People • Vaovao Mafana Rosia • Safety • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao Mafana Vietnam
Raha atotaly dia firenena 20 farafahakeliny no nanakana ny fidiran'ny Internet an'ny olona teo anelanelan'ny volana Jona 2020 hatramin'ny Mey 2021, fe-potoana nandrakofan'ny fanadihadiana.
Ireo mpampiasa Internet manerantany dia miatrika fanorisorenana, fisamborana ary fanafihana ara-batana noho ny hetsika an-tserasera.
Ny tatitra Freedom of Net dia manome isa amin'ny 100 ny firenena ho an'ny haavon'ny fahalalahana amin'ny Internet izay ankafizin'ny olom-pirenena.
Tamin'ny 2021, niatrika fanafihana ara-batana ny mpampiasa ho valifaty ho an'ireo lahatsoratra an-tserasera any amin'ny firenena 41.
Ny fahalalahana an-tserasera dia nihena manerantany ho an'ny taona faha-11 nisesy, araka ny tatitra isan-taona “Freedom on the Net”, navoaka androany.
Mandoko ny sary maloka momba ny fahalalahana dizitaly tamin'ny 2021, nilaza ny tatitra fa ireo mpampiasa Internet any amin'ny firenena mitombo isa dia niatrika fanorisorenana, fitazomana am-ponja, fanenjehana ara-dalàna, fanafihana ara-batana ary fahafatesan'ireo hetsika an-tserasera nandritra ny herintaona.
Nilaza ny tatitra fa ny fanidiana ny Internet tany Myanmar sy Belarus dia nanaporofo ireo teboka ambany indrindra tamin'ny endrika mampiahiahy amin'ny fampihenana ny fahalalahana miteny amin'ny Internet.
Natambaran'ny tranon'ny fisainana amerikana Freedom House, ny tatitra dia manome isa avy amin'ny 100 ny firenena noho ny haavon'ny fahalalahana amin'ny Internet izay ankafizin'ny olom-pirenena, ao anatin'izany ny halehiben'izy ireo amin'ny fameperana ny atiny azon'izy ireo idirana.
Antony hafa koa ny hoe mitady hanodikodina ny adihevitra an-tserasera ny troll mpomba ny governemanta.
"Tamin'ity taona ity, niatrika fanafihana ara-batana ny mpiserasera ho valifaty amin'ny hetsika ataon'izy ireo an-tserasera any amin'ny firenena 41," hoy ny tatitra, "avo lenta" hatramin'ny nanombohan'ny fanarahan-dia 11 taona lasa izay.
Ohatra amin'izany ny mpianatra bangladeshi iray naiditra hopitaly taorian'ny daroka noho ny resaka hetsika “fanoherana ny governemanta” tao amin'ny media sosialy, ary mpanao gazety meksikana iray novonoina taorian'ny famoahana horonantsary Facebook iray miampanga andian'olona mpamono olona.
Ary koa, ny olona dia nosamborina na voaheloka noho ny asany an-tserasera tany amin'ny 56 amin'ireo firenena 70 voarakitra ao anatin'ilay tatitra - 80 isan-jato ny isan'izy ireo.
Nampidirin'izy ireo mpitaona ejipsiana roa nogadraina tamin'ny volana jona noho ny fizarana horonantsary TikTok izay nandrisika ny vehivavy hanaraka asa amin'ny sehatra media sosialy.